महामारी अन्त्य हुन समय लाग्छ, सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी पहल आवश्यक « risingsunkhabar
महामारी अन्त्य हुन समय लाग्छ, सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी पहल आवश्यक
प्रकाशित मिति : १६ असार २०७८, बुधबार ०७:११
काठमाडाैं । ‘रेडक्रस तथा रेडक्रिसेण्ट सोसाइटीहरुको अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) का महासचिवमा अब ‘कुशल, अतियोग्य, क्षमतवान् तथा नयाँ गतिशीलता प्रदान गर्ने’ जगन्नाथ चापागाईँले नेतृत्व सम्हाल्नुहुने छ ।’
विगत २५ वर्षदेखि रेडक्रस अभियानमा निरन्तर क्रियाशील ५२ वर्षीय तत्कालीन उपमहासचिव चापागाईँले १ फेब्रुअरी २०२० देखि आइएफआरसीको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँले पदभार सम्हाल्दै गर्दा चीनमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण वृद्धि भइरहेको थियो भने सङ्क्रमणले अन्य देशमा विस्तारै ‘महामारी’को रुप लिँदै थियो । उहाँले रासससँग भन्नुभयो, ‘कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको शुरुआती दिनमा मैले विशेष गरी सङ्कटासन्न समुदायलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन, यसको उपचार तथा जीवन रक्षामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेँ । यसका लागि आवश्यक जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन भयो । यो अहिले पनि जारी छ । खोपको सफल परीक्षण पछि सबैलाई खोपको सुनिश्चिता गर्न पहल जारी छ । हाम्रा संयन्त्र यसैमा बढी परिचालित छन् ।’
आइएफआरसीले आफ्नो कार्यादेशअनुसार जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका र प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद् न्यूनीकरण तथा पीडितलाई महामारीका बीचमा पनि सहयोग निरन्तर जारी राखेको छ । करिब १८ महिनाका अवधिमा नै उहाँले मानवीय सेवाका क्षेत्रमा पुर्‍याउनुभएको कामले आइएफआरसीका सदस्य देशमा प्रशंसा कमाएको छ ।
विश्वका धनी तथा शक्तिशाली देशको सङ्गठन ‘जी सेभन’ को हालै सम्पन्न बैठक पनि खोपमा नै कन्द्रित थियो । बैठकमा सहभागी शीर्ष राजनेताले महासचिव चापागाईँको मानवीय सेवालाई खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । सो बैठक आयोजना हुनु अगाडिदेखि आइएफआरसीले ‘कोभ्याक्स’ अन्तर्गत विकासोन्मुख तथा गरीब देशहरुलाई खोप सहयोग गर्न निरन्तर पैरवी गर्दै आएको थियो । महासचिव चापागाईँले भन्नुभयो, ‘जी सेभेनले गरीब देशलाई खोप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा असाध्यै खुशी लागेको छ । अब यसको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ ।’ सन् २०२२ सम्म जी सेभेनले लगभग विलियन डोज खोप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका बताइएको छ ।
एक अध्ययनका अनुसार सो प्रतिबद्धता आवश्यकताभन्दा दश प्रतिशत कम नै हो । विश्वका सबैभन्दा गरीब ५० देशले दुई प्रतिशत मात्र खोप पाएका छन् । यी देशमा विश्वका १७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन् । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि देशभित्र र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ६० देखि ७० प्रतिशत मानिसलाई खोप लगाइनुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कोरोना विरुद्धको खोप समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रमा पुग्नुपर्दछ । सुबिधा सम्पन्न वर्ग र क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनुहुन्न । निश्चित क्षेत्रका जनसङ्ख्याले खोप पाएनन् भने महामारी निरन्तर जारी रहन्छ । खोप समानताका साथै यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । हामी राष्ट्रहरुका बीचमा र राष्ट्रहरु भित्रै कोभिड–१९ खोपको उत्पादन, वितरण र समतामूलक पहुँच वृद्धि गर्नका लागि सबै सम्भावित उपाय मनन गर्न राष्ट्रलाई प्रेरित गर्दछौँ ।’
उहाँले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसको पाखुरासम्म खोप पुर्‍याउने अभियानमा स्वयंसेवी रेडक्रस तथा रेडक्रिसियन्टकर्मीे समुदायसँग साथ साथमा अहोरात्र खटिरहेका जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महामारीको अन्त्य हुनु भनेको केवल द्रुतत्तर दरमा धेरै खोप प्राप्त हुनु मात्र होइन । खोप प्राप्त गरेदेखि मानिसको पूर्ण स्वीकृतिका साथ उनीहरुको पाखुरासम्म नपुगुञ्जेल आवश्यक पूर्वाधार र मानवीय स्रोतका लागि राष्ट्रले सुनिश्चित गर्नु पनि हो । हामीले पहिलै धेरै उदाहरण देखेका छौँ ।
खोप प्राप्तकर्ता देशका तयारीमा लगानीको कमीका कारण र खोपका मात्रामा ढिलाइको प्रावधानका कारणले खोप सङ्कटासन्न समुहमा पुग्नुपूर्व नै म्याद सकिसकेको हुन्छ । समुदाय परिचालनमा धेरै काम गर्नुपर्दछ । अन्यथा खोप लगाउनेमा हुने हिच्किचावटले कुनै पनि अभियानलाई कमजोर बनाउन सक्छ । खोपको मात्रा प्राप्त गर्ने राष्ट्रमा हामीले देखेकै कुरा हो, आप्रवासी, सीमान्तकृत वा जातीय अल्पसङ्ख्यकसहितका सङ्कटासन्न समुदायका खोपमा समान र सजिलो पहुँच हुन सकेको छैन । समतामूलक खोप नैतिक आवश्यकता हो । सबैजनाले खोप पाउँछन् र सबै ठाउँमा उच्च जोखिमका र सङ्कटासन्न व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न साझा मानवीय मूल्यमा हामी सबैसँंगै आउनुपर्दछ । हामीले कसैलाई पछाडि नछाडी अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्न र कसैलाई छुटाएको छैन भन्ने सुनिश्चितताका लागि कडा मेहेनत गरिरहेको छौँ ।”
उहाँका अनुसार देशहरुका बीचमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य हुन नसक्दा कोभिड–१९ ले विनाशकारी र क्रुररुप देखायो । समयमा कोभिडसँग सामूहिक रुपमा जुध्न सकिएको भए यसले ‘महामारी’को रुप लिन नसक्ने आइएफआरसीले आँकलनसमेत गरेको छ । आगामी दिनमा यस्तो गल्तीबाट जोगिन ‘अन्तरदेशीय महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कानून’ तथा घरेलु कानून आवश्यकता रहेको उहाँ औँल्याउनुहुन्छ ।
आइएफआरसीले महामारी कानूनका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो सभामा पैरवीसमेत गरेको बताइएको छ । महासचिव चापागाईँले भन्नुभयो, “महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र सामूहिकरुपमा जुध्न महामारी कानूनले सहयोग गर्छ । एउटा सफल सन्धिले विशेष गरी स्वास्थ्य स्वयंसेवक र अन्यलाई महामारी रोकथाम र पूर्वतयारीमा थप सहयोग गर्छ । साथै घरेलु र अन्तरराष्ट्रिय लगानीमा प्रोत्साहन र विश्वव्यापी समानतालाई प्रतिबद्धसमेत गर्छ । परीक्षण, खोप र उपचारको पहुँचसहित महामारीबाट सुरक्षित हुन आप्रवासी र शरणार्थीसहित सबैको अधिकारलाई जोड दिन्छ । यसले महामारी पूर्वतयारीका लागि अझ राम्रो र समान राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय ढाँचाको आवश्यकतालाई पनि रेखाङ्कित गर्दछ । महामारी समुदायबाटै सुरूआत हुन्छ र समुदायमै अन्त्य हुन्छ । यो कुरालाई इबोला महामारीले पुष्टि गरिसकेको छ ।”
आइएफआरसीमा आबद्ध देशीय रेडक्रस र रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीमा आबद्ध स्वयंसेवक तथा कर्मचारी कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा अग्रपङ्क्तिमा जुटिरहेका छन् । महामारीका समयमा लाखौँ मानवीय सहायता, जनस्वास्थ्य र रोकथामका उपाय लिई स्वयंसेवक समुदायमा परिचालन भइरहेका उसले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य सङ्कटकालमा स्वास्थ्य योजनाको तयार गर्ने, जानकारी लिने र प्रतिकार्य गर्ने सबै योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रयासमा समुदाय केन्द्रमा हुनुपर्दछ । समुदाय नै ती हुन् जसले अन्ततः रोगको विस्तारलाई अन्त्य गर्नेछन् । यसको लागि रोगको महामारीले नराम्रोसँग प्रभाव पार्ने स्थानका सहज पहुँच नभएका जनसङ्ख्याको लागि पहुँच पुर्‍याउन तिनीहरूमा अझ बढी लगानी, प्रशिक्षण, सुरक्षा र सहयोग आवश्यकता छ । यो विशेष गरी कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र अपर्याप्त पूर्वाधार भएका देशहरूमा महत्वपूर्ण छ । पूर्वतयारी र रोकथाममा सामान्य लगानीले ठूलो प्रतिफल दिन्छ । ‘
आइएफआरसीले जलवायु र वातावरण बडापत्र अनुमोदनका लागि पनि जोड दिइरहेको छ । ती दुई क्षेत्रले भविष्यमा मानवीय सङ्कट निम्त्याउने खतरा औँल्याउँदै उसले यसबाट गरीब र सीमान्तकृत समुदायलाई बढी असर पुर्‍याउने जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले दक्षिण एशिया बढी प्रभावित बनेको छ । खासगरी नेपाल र भारतमा उच्च सङ्क्रमण तथा मृत्युदर रह्यो । महासचिव चापागाईँले कोभिडसँग जुधिरहेका नेपाललगायत अन्य देशमा जीवन बचाउन र जोखिममा रहेकालाई पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा र खोपको पहुँच पु¥याउन सहयोग जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्क्रमणको दर केही क्षेत्रमा स्थिर वा कम हुन सक्छ । यद्यपि अस्पतालमा अझै बिरामी धेरै छन् । यसैले आइएफआरसीले नेपाल र भारतसहित सङ्क्रमण दर उच्च रहेका देशमा रेडक्रस र स्वास्थ्यकर्मीसँग सहकार्य गर्दै जीवन बचाउने अक्सिजन उपकरण र अन्य स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्दै आएको छ ।’
महासचिव चापागाईँले महामारी सकिन समय लाग्ने जनाउँदै खोपसहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा प्रविधिहरु बाँड्न तथा खोपको समतामूलक पहुँचका लागि विश्वमा सामूहिक प्रयास आवश्यकता औल्याउनुहुन्छ । आफ्नो कार्यकालको १८ महिनालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, ‘कोभिड–१९ को महामारीको शुरुआती चरण अर्थात् १ फेबु्रअरी २०२० मा मैले आइएफआरसीको महासचिवको कार्यभार लिएँ । विगत १८ महिनालाई फर्केर हेर्दा अहोरात्र कोभिडबाट संकटासन्न समुदायलाई कसरी बचाउँने भन्नेमा मैले समय लगाए । अहिले पनि यो कार्य जारी छ । मानवीय सेवामा तल्लीन हुन पाउँदा गौरवान्वित बोध भएको छ । चुनौतीका पहाडसँग अहोरात्र जुध्न प्रयासरत छु ।
महामारीमा अन्तरराष्ट्रियस्तरका व्यक्ति नखटिकन स्थानीय प्रतिकार्य समूहले कसरी काम गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा वास्तवमा नै विश्वव्यापी परीक्षण भएको छ । रेडक्रस र रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीमा आबद्ध लाखौँ स्वयंसेवीले मानवीय सेवा तथा कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्यलाई निरन्तर जारी राखेका छन् । कोरोनाले हाम्रो आफ्नै अपरेशन पनि गहिरो रुपमा प्रभावित भयो र परीक्षण भयोे । हाम्रो कर्मचारी र स्वयंसेवकले काम गर्ने नयाँ तरिका अनुकूलन गर्नुपर्‍यो । घरबाट, भर्चुअल र एक अर्काबाट टाढा भएर काम सम्पादन भए । रेडक्रसकर्मीको कोभिडबाट असामयिक निधनसमेत भयो । डर र त्रासको सामना गर्दै काम गर्दा कतिले परिवारका सदस्य त कतिले नजिकका साथी गुमाए ।’
स्वैच्छिकता रेडक्रस आन्दोलनको आधारशीला भएको छ । आगामी दिनमा दिनमा यसको भविष्यलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा उहाँले आफूले नेपाल रेडक्रसको स्वयंसेवकका रुपमा मानवीय सेवा शुरुआत गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अरुलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ मैले सिकेको छु । स्वैच्छिकतालाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । रेडक्रस अभियान स्वैच्छिकतामा उभिएको छ । यसको जगका उभिएका स्वयंसेवकको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्वयंसेवक बन्न आकर्षित गर्नु जरुरी छ । यो कार्य हामीले गरिरहेका छौँ । समुदाय बलियो भएमा मात्र विपद् तथा महामारीसँग जुध्न सक्दछन् ।’
पाँच दशकअघि चितवन दिव्यनगरमा सामान्य परिवारमा महासचिव चापागाईँको जन्म भएको थियो । आठ दाजुभाइ र दुई दिदीबहिनी भएका परिवारमा उहाँ हुर्किनुभएको थियो । उहाँले विसं २०३७ मा भरतपुरस्थित बालकुमारी विद्यालयमा अध्ययन गर्दा जुनियर रेडक्रस सर्कल गठन गरी मानवीय सेवाका यात्रा सुरुआत गर्नुभएको थियो ।